रोक्न सकेन इटहरी सरकारले पैनी अतिक्रमण
रोक्न सकेन इटहरी सरकारले पैनी अतिक्रमण स्तम्भः जे देखेँ, त्यही लेखेँ
यो साता इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले खोला तथा नहर पैनीमा अतिक्रमण गरी घर तथा संंरचना बनाउँदा बाढीले वितण्डा मच्चाएको भन्दै ती संरचनालाई भत्काउन उपमहानगरपालिका तत्पर रहेको बताइन् । तर, बर्सेनि बाढीको वितण्डा र झमेला खेपिरहेका इटहरीबासीले यस्ता भाषण सुनेको भने वर्षौं भयो । तथापि पैनी अतिक्रमण रोक्ने अभियान भने चलेन ।
पूर्वको उदाउँदो सहर इटहरीमा खोला तथा पैनी मिचेकै कारण वर्षायाममा केही भाग डुबाउनुका साथै धनजनको समेत क्षति हुँदै आएको छ । सहर हँुदै बग्ने पैनी तथा ऐलानी जग्गामा भूमाफियाको चलखेलकै कारण इटहरीमा बर्सेनि सर्वसाधारणको ओछ्यानबाट बाढी कुद्ने समस्या रोक्न इटहरी उपमहानगरले अभियान नचलाएको भने हैन । तर, पैनीमै नेताहरूकै संरचना परे पछि एकाएक रोकिएको अभियान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन ।
लामो समयदेखि खोला–नाला तथा पैनीहरू अतिक्रमण गरेर ठूला–ठूला भवन बनाउँदा इटहरीका अधिकांश सर्वसाधारणले वर्षायाममा ठूलो कष्ट व्यहोर्नु परेको बाध्यता ज्यूँको त्यूँ छ । बाढी रोकथामको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न जनप्रतिनिधिले पनि सकेनन् । पैनी अतिक्रमण रोक्ने चुनावी नारा पनि पूरा भएन । इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले सुरुवाती समयमा अतिक्रमण रोक्न राम्रै प्रयास गरे पनि अभियान अगाडि नबढ्दा प्रयास केवल प्रयासमै सीमित हुन पुग्यो ।
इटहरीजस्तो तीव्रत्तर विकास भइरहेको सहर डुब्नु चानचुने विषय भने हैन । विकासको क्रमसँगै बसाइ सरी आउनेहरूको सङ्ख्यासमेत दिनानु दिन बढिरहेको सहरमा यसरी पैनी मिच्नेहरूलाई कारबाही गर्न इटहरी सरकार असफल भएको भने पक्का हो । पानी निकासको राम्रो व्यवस्था नहुनु र नदी तथा खोला क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै घर निर्माण गर्नु इटहरीको मुख्य चुनौतीको विषय हो ।
त्यसकारण पनि अतिक्रमण गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न बनेको संरचना भत्काउनु जरुरी थियो । तर, त्यो काम हुन नसक्नु इटहरीका जनताको लागि दुःखद् पक्ष हो । इटहरीमा ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलका केही नेताहरूले ऐलानी जग्गामाथि गरिरहेको दोहन रोक्न मात्र सकेको भए इटहरी सरकार हाई–हाई हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।
विशेषगरी इटहरी चौकसँगै भएर बग्ने टेङ्ग्राखोला र खेतीखोलाको तीव्र अतिक्रमण भएको छ । खोलाको दुवैतिरबाट घर बनाउन तार जारी गर्दै र घरको पर्खाल नै बनाएर खोला मिचिएको छ । खोला मिचिएर साँघुरो भएपछि वर्षाको समयमा खोलाको पानी कमजोर र साँघुरो क्षेत्रलाई भत्काउँदै बजारमा पस्ने गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष यो समस्याले इटहरीबासी हैरान भएका छन् । तर, वर्षमा एक पटक दुःख भोग्न बानी परेका इटहरीबासीहरू अरू बेला यस विषयमा छलफल र बहस मात्र पनि गर्दैनन् । राजनीतिक बहससमेत हुँदैन । यसरी पनि थाहा हुन्छ कि इटहरी सरकार मात्र नभई विभिन्न दलका नेताहरू पनि यस विषयमा गम्भीर भएनन् ।
सर्वपक्षीय छलफल चलाएर पैनी अतिक्रमण रोकौं
पैनी अतिक्रमण नरोकिएसम्म इटहरी डुब्ने क्रम निरन्तर चली नै रहने देखिन्छ । तर, अब इटहरीमा जति पनि घरहरू नक्सा पास नगरी र खोला–नाला अतिक्रमण गरेर बनेका छन्, ती संरचना भत्काउन सबै दल र समाज मिल्नुको विकल्प छैन । निर्माण गरिएका घर तथा भवनहरूलाई अभियान नै चलाएर भत्काएरै छाडियो भने मात्र इटहरी डुबानको समस्या कम हुँदै जानेछ ।
यसरी मनपरी तरिकाले सहरको पैनी नियन्त्रण गर्नेलाई धमाधम कारबाही गर्ने हो भने केही हदसम्म इटहरी डुबान हुने थिएन । पैनी अतिक्रमण गर्नेहरूकै कारण आज इटहरीवासी समस्यामा परेका छन् । यसरी पैनी अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध आम सर्वसाधारणले दबाव दिने कि नदिने ? कि डुबानपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर रोइलो मात्र देखाउने हो ? हैन, भने इटहरीका प्रत्येक जनताले अरू धनजन र डुबानबाट क्षति हुन नदिन नागरिक दबाव बढाउनु पर्छ ।
इटहरीले हरेक बर्खामा डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । २०७४ साउन २७ को बाढीले इटहरीमा ६ जनाको ज्यान लियो । १ हजारभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भए । मुख्यतः ३, ४, ६, ९ र १० नम्बर वडा बढी प्रभावित भएका थिए । गत भदौमा पनि इटहरीमा दुईजना मृत भेटिए ।
नियमतः खोलादेखि ३० मिटर आसपासको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, पैनी अतिक्रमण राक्ने अभियान कडाइका साथ लागू नहुँदा अहिले पनि अतिक्रमण निरन्तर भइरहेको छ । भएका ड्रेनहरू समयमै सफा नगर्ने र खोला मिचेर संरचना बनाउँदा बाढी बजारमा कुद्ने समस्या अब कसले रोक्ने सरकार ?